Inqaku leRedmi 10 sele linomhla wokumiliselwa, kwaye ngoMatshi 4 | I-Androidsis
Inqaku leRedmi 10 sele linomhla wokumiliselwa, kwaye ngoMatshi 4
Besisele siyazi loo nto I-Redmi Qaphela i-10 series iya kuphehlelelwa ngo-Matshi, kwinyanga ezayo, kodwa hayi olona suku luchanekileyo, kwaye yile nto sele siyazi ukuba siyabulela kwisibhengezo esisandula ukwenziwa nguRedmi ngeposta esemthethweni.
Ngu-Matshi 4 umhla esiza kube sisazi ngayo iRedmi Qaphela iNew 10 ngesitayile. Umhla ubekwe, ngexesha lokupapashwa kweli nqaku, malunga neeveki ezimbini, kungekudala siza kuba nabaphumeleleyo kuludwe lweRedmi Note 9, olube yimpumelelo kwintengiso.
Ngo-Matshi 4 siza kudibana neRedmi Qaphela 10
Isibhengezo somhla wokumiliselwa kweRedmi Qaphela i-10 sinikwe njengehlabathi liphela, nangona lo msitho uza kubanjelwa eIndiya, ke kulindeleke ukuba ii-smartphones zibekhona apho kuphela, ubuncinci ekuqaleni. Ke, emva kweentsuku okanye iiveki ezimbalwa, ezi ziya kuthengiswa kwihlabathi jikelele.
Uluhlu kuthiwa lwenziwe ziimodeli ezine ze-smartphone, eziyi I-Redmi Qaphela i-10, Qaphela i-10G, Qaphela i-5 Pro 10G kunye neNqaku le-4 Pro 10G. Ayaziwa ukuba ezi terminals zine ziya kubhengezwa nge-4 ka-Matshi, kodwa ngethemba lokuba bazokwazisa.
I-Qualcomm's Snapdragon 750G iya kuba yiprosesa chipset ejongene nokubanika amandla. Inokufunyanwa phantsi kwazo zonke iimodeli, kodwa oku kuhlala kubonakala. Kwelinye icala, i-Snapdragon 765G ikwakhankanyiwe kokunye ukuvuza, ke sihlala sijonga ukuba yeyiphi na i-SoC eya kuthi inike amandla uthotho olutsha.
Amanye amahemuhemu abonisa ukuba iRedmi Qaphela i-10 iya kuba neekhamera ze-quad ezine-sensor ephambili ye-108 MP. Le yinto esele ikhankanyiwe kwiingxelo ezahlukeneyo njengokuvuza, nangona singekayiqinisekisi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Inqaku leRedmi 10 sele linomhla wokumiliselwa, kwaye ngoMatshi 4
I-network Parler iyasebenza kwakhona
IXiaomi Mi 11 Lite ibonakala kwimifanekiso: yindlela olujongeka ngayo uluhlu lwephakathi